Vatengesi - Shineon Technology Co., Ltd.
GSR Ventures ibhajeti yemari inovhara mari inonyanya kuisa mari kumakambani ekutanga uye ekukura eetekinoroji ane mashandiro makuru muChina. GSR parizvino ine madhora angasvika bhiriyoni rimwe pasi pehutungamiriri, Nzvimbo dzayo dzekutarisisa dzinosanganisira semiconductor, Internet, wireless, nyowani midhiya uye green technology.
Northern Light Venture Capital (NLVC) inotungamira China-yakatarisana nekambani capital inotarisana nekutanga uye kukura nhanho mikana. NLVC inobata ingangoita US $ 1 bhiriyoni mumari yakazvipira ne3 US $ mari uye 3 RMB mari. Yayo portfolio makambani anotora TMT, Yakachena Technology, Hutano, Yepamberi Kugadzira, Mutengi uye zvichingodaro.
IDG Capital Partners iri kunyanya kutarisa kudyara muzvirongwa zvine chekuita neVC & PE kuChina. Isu tinonyanya kutarisa kumakambani anotungamira muzvigadzirwa zvevatengi, masevhisi efranchise, internet uye isina waya application, midhiya nyowani, dzidzo, hutano, simba nyowani, uye zvikamu zvemberi zvekugadzira. Isu tinoisa mari mumatanho ese ehupenyu hwekambani kubva padanho rekutanga kusvika pre-IPO. Mari yedu inotangira kubva US $ 1M kusvika US $ 100M.
Mayfield Akawanikwa ndeimwe yekambani yepamusoro yepasi rose yekudyara, Mayfield ane $ 2.7 bhiriyoni pasi pe manejimendi, uye anopfuura makore makumi mana nemaviri nhoroondo. Yakaisa mari mumakambani anopfuura mazana mashanu, zvichikonzera anopfuura zana eIPOs uye anodarika zana kubatanidzwa nekutenga. Maseru ayo akakosha ekudyara anosanganisira Enterprise, Mutengi, Energy Tech, Telecom uye Semiconductors.